SaLone - Shwe Myanmars
SaLone started following One Female or Two Females for rent, Technician, Engineer (CNC Machining) and and7others 20 hours ago
SaLone posted an advert in Full-Time Jobs
ZERRO POWER SYSTEMS PTE. LTD. Responsibilities: · Design of block level layout of analog/mixed signal circuits · Check all requirements/rules to qualify the database to be ready for Tape out. Requirements: · Diploma in electrical/electronic engineering · Minimum5years of experience in analog circuit layout design, preferably power management applications · Bachelor’s degree will be an added advantage · Candidates with relevant education/experience are invited to apply for the following position. Suitable candidates will be called foraface to face interview. Please Sign Up or Log In to see contact details.
Singapore Grand Prix: Singapore F1 - Formula 1 Night Race
SaLone postedalink in Festivals & Events
SaLone postedagallery image in Peninsula Plaza
ဘယ်လို filing လုပ်မလဲ
SaLone replied to SaLone's topic in IRAS & Income Tax Matters
ခုချိန် Novena က IRAS သွားပါ အဲ့အောက်မှာ volunteer တွေရှိပါတယ် filling လုပ်ဖို့ singpass မရှိသူတွေ မေ့သူတွေကို တခါတည်းသူတို့ filling လုပ်ပေးပါတယ်
SaLone postedatopic in IRAS & Income Tax Matters
ရုံးကလည်း filing မတင်ပေးဘူးဆိုရင် iras login လည်းဝင်လို့မရလို့ sim card terminate လုပ်လိုက်လို့ OTP မရတော့လို့ ဘယ်လို filing လုပ်မလဲ 17 မှမတင်ရင် late filing fees $150 ပေးရမှာမို့ အကြံပေးပါအုံး
Qualifying Child Relief (QCR) ပြန်ပြီး Claim လုပ်ဘူးသူ
Filing လုပ်တဲ့အချိန်မှာ log in လုပ်ပြီး QCR section မှာ သူတို့ တောင်းထားတဲ့ information တွေဖြည့်ပေးရုံပါဘဲ... ကလေးရဲ့ date of birth နဲ့ တချား simple basic information တွေဘဲတောင်းတာပါ မိန်းမအလုပ်လုပ်ရင်မိန်းမဘဲ claims လို့ရတယ် မိန်းမအလုပ်မလုပ်မှ ယောက်ကျာင်္း claims လို့ရ QCR မှာ ၄၀၀၀ ဆိုပြီး ရိုက်ထဲလိုက် ဒါဘဲ
IRAS မှာ Qualifying Child Relief (QCR) ပြန်ပြီး Claim လုပ်ဘူးသူများရှိရင် အတွေ့အကြုံလေးများ ပြန် Share လုပ်ပေးကြပါဦး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
SaLone postedablog entry in Work Passes
Admin အပိုင်းနဲ့ တင်ခွင့်ပြုပါရှင့် Part (1) SPass ကရေးရမှာများပါတယ် အပိုင်းနဲ့ တင်ပေးပါမယ် 1. SPass အဓိပါယ် အလည်အလက် level တခုပါ (mid-level ), professional ကတော့ EP ပါ။ 2. ဘယ်သူတွေ လျှောက်လို့ရလဲ • လစာ ၂၃၀၀ နှင့် အထက် : သတ်မှတ်လစာကတော့ ၂၃၀၀ ပါ သို့သော် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ and/or ကိုယ်ရထားတဲ့ အောင်လက်မှတ်နဲ့ လျှောက်တဲ့ position ပေါ်မူတည်ပြီး 2300 ထက်ပိုမှ approve ဖြစ်တာတွေ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုများလာပါတယ် • အောင်လက်မှတ်: သတ်မှတ်ချက်ကတော့ ဘွဲ့လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဒီပလိုမာ လက်မှတ်ရှိရပါမယ်၊ technical level (e.g. engineer) လို level ဆိုရင် professional certificate or technical certificate ရှိရင် Spass try လို့ရပါတယ်. ဒါပေ့မယ် အဲဒီ certificate က သင်တန်းကာလ ၁နှစ်အောင် (part time study) ဆိုရင်တော့ မရပါဘူး • Experience: အောင်လက်မှတ်တွေ မရှိလဲ မိမိလျှောက်မဲ့ Spass ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြု့တော်တော်များများရှိပြီး သတ်မှတ် လစာ ၂၃၀၀ နှင့် အထက် ဆိုရင်လဲ လျှောက်လို ရပါတယ်။ Company တော်တော်များများကတော့ အပေါ် ၂ချက်ရှိမှ လျှောက်ပေးကြပါတယ် ။ ကျွန်မ လုပ်ခဲ့တဲ့ company နှင့် အခုလုပ်နေတဲ့ company မှာတော့ WP တွေကို Spass ပြောင်းရင် ဒီ experience နဲ့တင်ပါတယ် ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စက်ရုံ လုပ်သမားတွေမှာ certificate မရှိလို့ပါ၊ Spass က WP လိုမဟုတ်ပါ ၊ ဘယ် sector မဆိုလျှောက်လို့ရပါတယ် Spass အတွက် အရေးကြီးဆုံးက လျှောက်ပေးမဲ့ company မှာ quota ရှိဖို့ပါ၊ quota တွက်ပုံတွက်နည်းကတော့ sector ပေါ် မူတည်ပီးကွဲပါတယ်၊ 3. Spass သက်တမ်း ဘယ်လောက်ရလဲ Spass သက်တမ်းပုံမှန် ၂နှစ်ပါ၊ မိမိကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ Passport ကလဲ ၂နှစ်နဲ့အထက်ရှိရပါမယ်။ Passport ၂နှစ်အောက်ဆိုရင်တော့ Spass ကို Passport သက်တမ်းရှိသလောက် or ၁နှစ်ဘဲ ပေးပါတယ် 4. Spass လျှောက်ရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲ ၂ပတ်ပါ ၊ စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံရင် ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ တခါတလေလဲ ၁လ ၊ ၁လခွဲ အထိကြာတတ်ပါတယ် 5. Spass အတွက်ဘာတွေလိုသလဲ ရေးခဲ့ ဖူးတဲ့ WP အတိုင်းပါဘဲ. Spass လျှောက်မယ်ဆိုရင် Passport, အောင်လက်မှတ်လိုပါတယ်၊ ကိုယ်လျှောက်မယ့် company မှာလဲ Spass Quota ရှိရပါမယ် 6. Company ေတြ ဘာလို့ quota မရှိဘူး ပြောတာလဲ တချိူ့ company တွေ့က quota တကယ် မရှိတာပါ။ ဒါပေ့မယ် company တော်တော်များများက ရှိ၇ဲ့နဲ့မသုံးတာပါ၊ quota ကို low level staff တွေ အတွက် မသုံးချင်ပါဘူး Spass quota ၁ခု ဟာ WP estimate 3-7 ခုအထိညီမျှပါတယ် ဒါကြောင့် company တွေ က quota မရှိဘူး အမြဲ ပြောတာပါ。Sector အလိုက် quota % တွေ ကွဲပါတယ်. Local staff များများရှိရင် quota များပါတယ် 7. SPass အတွက် company က ဘာတွေ တာဝန်ယူလုပ်ရပါသလဲ • New hire ဆီက အဓိက စာရွက်စာတမ်း (passport, အောင်လက်မှတ်) • Employer မှ IPA letter ကို employee ထံသို့email ပို့ပေးရပါမယ် • Employee Singapore ကို ရောက်ရင်တော့ employer မှ ဆေးစစ်ပေးရပါမယ် ၊ MOM မှာ လက်ဗွေနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့၁ရက်အချိန်ပေးရပါမယ်၊ မှတ်ချက်: ဆေးစစ်စရိတ် company က ပေးရမှာပါ 8. Employee (ဝန်ထမ်း) က ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမလဲ • စာရွက်စာတန်းတွေကို သေချာစစ်ပါ Passport, IPA letter ကို print ထုပ်ထားပါ • မိမိရဲ့ အောင်လက်မှတ်များကို ဘာသာပြန် နိုတြိ လုပ်ခဲ့ပါ စင်ကာပူမှာ အရမ်းစျေးကြီးပါတယ် • Save ဖြစ်အောင် ဆေးကြို စစ်ထားသင့်ပါတယ် စာဆုံးတဲ့ အထိဖတ်ပေးလို့ကျေးဇူးပါရှင့် သိချင်တာလေးတွေ cb or comment မှာမေးနိုင်ပါတယ်ရှင့် Credit: FattyCrab WS
NEURONES IT ASIA PTE. LTD. Roles & Responsibilities We are looking for .Net Developer for one of our clients in Energy and Commodities Sector. The .Net Developer will be: Work withinahybrid internal/consultant/vendor team to deliver new features and integrations to support businesses. Haveastrong engineering focus and eye for high quality delivery. The incumbent will be expected to deliver high quality software and adhere to modern software engineering practices. Have strong systems analysis skills, particularly in understanding the complexities of existing software systems. Be comfortable with agile delivery modes such as Scrum or Kanban but also be flexible to work with whichever delivery approach works best for the problem at hand. Provide 3rd line production support for any solutions delivered. Requirements Role and Responsibilities Extensive (5+ years) experience with C# .NET - Service oriented development (WCF, Web API or ASMX) - Data access development (ADO.NET, EF or equivalent such as NHibernate - Winforms or WPF development Good TDD skills (must have excellent working knowledge ofa.NET unit testing framework such as NUnit, xUnit or Test andamocking tools such as Moq, RhinoMocks, etc…) Good SQL Server database design and development skills (excellent SQL skills assumed) Experience in continuous integration (tools such as TFS Build, TeamCity, Bamboo, etc…) Experience working with agile delivery methodologies such as SCRUM or Kanban. Highly motivated to continually develop skills and techniques to ensure the best tools are used for the job. Please Sign Up or Log In to see contact details.
Mobile Apps Software Developer
JSB TECH PTE. LTD. Roles & Responsibilities iOS and Android App IT R&D Engineers would have opportunities to apply their knowledge and skills in both App and web-based as well as C-Programming for the development of our next generation world-class, award-winning IoT new products including exposure to travel in major world-leading exhibitions and tradeshows in Japan, US, Germany, etc. The job involves to define new products specification and develop strategy to achieve set functional performances. Shaping and setting the strategy for the new product development roadmap. Opportunity to interact with world-leading customers R&D centers in U.S., Japan, Germany to tackle design and technical related matters. Overseeing the construction of new product's prototypes and pilot production of newly designed products prior launching to US, Japan & Germany markets. Have opportunities to visit our factory to interact with our production, engineering and production teams. Inspired R&D engineers are empowered to involve in getting their designs and original concepts patented with their names included in the company's patent registration at IPOS, USPTO or WIPO. Thus building their own professional profile with genuine R&D exposure at JSB beyond merely gaining working experience alone. Senior R&D engineers would have the opportunity to perform applied research, involve in writing patents to be registered in IPOS, USPTO or WIPO and technical papers to be published at leading conferences and international journals under supervision by JSB's advisory team. Job Responsibilities : Develop iOS apps with Swift and Android apps with Java using Android Studio. Maintain and update iOS/Android apps Maintain internal and external testers and release beta apps to TestFlight. Responsible to deploy latest iOS apps and Android apps Design and develop front-end and back-end mobile application. Participate in brainstorming sessions with team members to develop web and mobile applications. Please Sign Up or Log In to see contact details.
SaLone postedacalendar event in Community Calendar
FIFA International Friendly Match ️ Singapore Vs Myanmar 11 Jun 2019, 7:30pm (SIN), 6:00pm (MYA) 🏟 Sports Hub, National Stadium, Singapore https://sportshubtix.evenue.asia/…/ncommerc…/SEGetEventInfo…
fifa international friendly match
FIFA International Friendly Match 🇸🇬⚽️🇲🇲 Singapore Vs Myanmar 11 Jun 2019, 🕢 7:30pm (SIN), 6:00pm (MYA) 🏟 Sports Hub, National Stadium, Singapore https://sportshubtix.evenue.asia/…/ncommerc…/SEGetEventInfo…
Hate from Love
SaLone postedafile in eBooks
Hate from Love Author : A Lynn Thit Category : Novels https://bit.ly/2I1hI21
a lynn thit